Waxaa laga yaabaa in aad dareento in rabitaanka galmo ee ku aadan lamaanahaaga uu hoos u dhacay isla markaana aheyn qaabkii hore oo kaliya aad u sameyneyso in aad qanciso isaga . Ogoow kaligaa ma aha ee waxaa jira haween badan oo arintaan ka sheeganaya , waxaan warbxintaan ku soo qaadaneynaa sababaha haweenka ku keena in ciyaarta sariirta ka caagto . * Baaritaano ayaa sheegaya in haddii fowdo ay ka jirto qolka jiifka taas waxa ay keeneysaa murago iyo hamaansi (halaaqo) waxa ayna hoos u dhigeysa rabitaanka galmo Sidee ayaad ku soo ceshan kartaa rabitaanka galmo ugana hor tagti kartaa fowdadaas? kaliya ninkaada u muuji falal Romantic ah oo kicinaya dareenkiisa xooggana waxaad saartaa in guriga caraftiisa ay kam-kamto. * Xanaaqa : Haddi aad u careysan tahay ninkaada lagama yaabo in macaan raaxo aad hesho si aad rabitaankada u soo ceshatid daba gal ku samee isha xanaaqaas uu ka yimid , ha ogalaan in xanaaqa uu kaa sumeeyo kulanka macaan ee sariirta . * Wax yaabaha maadiga ah : cabsida dhanka maaliyada saameyn xooggan ayay ku leedahay rabitaanka galmo , inta aad sariirta been ku sheegi laheyd gabaryaheey adiga oo murago maaliyadeed ku hayso ha iska xaadirin garoonka ciyaarta . * Haddii u kacsan Cholestrol-ka dhiiga : waxaa jira xariir ka dhaxeeya sara kaca Cholestrol-ka iyo gaaridda haweenka macaanka galmada , iyadoo haddii uu saro maro waxaa uu xayirayaa in dhiigga uu ku soo shubmo mantiqada kaadi hayska wax ayna taasi yareeneysa dareemaha xubinta haweenka waxa ayna keeneysa in ay adkaato in macaanka aad gaarto , waana arin galmada ka dhigeysa mid niyad jab ah . Marka ay arintaan jirto maxaad sameyneysaa? badel jadwalkaada cunno , wacdaraha.com waxa ay ku leedahay sidoo kale waxaad iska yareeysaa cabidda caanaha gasaceysan oo badso cunista qudaarta . Jawiga Romantic-ga oo qarsooma : hadii uu ninka ku mashquulo nolosha maadiga ah waxaa lumaya nolosha jaceylka , waxa uuna iloobaya kulamada Romantic-ga ah . Sidee jawigaas ku soo celin kartaa? u qoondeey ninkaada habeen qorsheysan, ka codso in banaanka ka soo cunteysaan , ku soo jilci banaanka adiga oo dhoola cadeyn ku soo dilay guriga keen markaas wiishka u yeeri . Fikirkaada waa muhiim hadaad hayso arimo kale oo wiiqa rabitaanka galmo ee haweenka si asxaabta bogga uga faa`ideystaan. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Waxaa laga yaabaa in aad dareento in rabitaanka galmo ee ku aadan lamaanahaaga uu hoos u dhacay isla markaana aheyn qaabkii hore oo kaliya aad u sameyneyso in aad qanciso isaga . Ogoow kaligaa ma aha ee waxaa jira haween badan oo arintaan ka sheeganaya , waxaan warbxintaan ku soo qaadaneynaa sababaha haweenka ku keena in ciyaarta sariirta ka caagto . * Baaritaano ayaa sheegaya in haddii fowdo ay ka jirto qolka jiifka taas waxa ay keeneysaa murago iyo hamaansi (halaaqo) waxa ayna hoos u dhigeysa rabitaanka galmo Sidee ayaad ku soo ceshan kartaa rabitaanka galmo ugana hor tagti kartaa fowdadaas? kaliya ninkaada u muuji falal Romantic ah oo kicinaya dareenkiisa xooggana waxaad saartaa in guriga caraftiisa ay kam-kamto. * Xanaaqa : Haddi aad u careysan tahay ninkaada lagama yaabo in macaan raaxo aad hesho si aad rabitaankada u soo ceshatid daba gal ku samee isha xanaaqaas uu ka yimid , ha ogalaan in xanaaqa uu kaa sumeeyo kulanka macaan ee sariirta . * Wax yaabaha maadiga ah : cabsida dhanka maaliyada saameyn xooggan ayay ku leedahay rabitaanka galmo , inta aad sariirta been ku sheegi laheyd gabaryaheey adiga oo murago maaliyadeed ku hayso ha iska xaadirin garoonka ciyaarta . * Haddii u kacsan Cholestrol-ka dhiiga : waxaa jira xariir ka dhaxeeya sara kaca Cholestrol-ka iyo gaaridda haweenka macaanka galmada , iyadoo haddii uu saro maro waxaa uu xayirayaa in dhiigga uu ku soo shubmo mantiqada kaadi hayska wax ayna taasi yareeneysa dareemaha xubinta haweenka waxa ayna keeneysa in ay adkaato in macaanka aad gaarto , waana arin galmada ka dhigeysa mid niyad jab ah . Marka ay arintaan jirto maxaad sameyneysaa? badel jadwalkaada cunno , wacdaraha.com waxa ay ku leedahay sidoo kale waxaad iska yareeysaa cabidda caanaha gasaceysan oo badso cunista qudaarta . Jawiga Romantic-ga oo qarsooma : hadii uu ninka ku mashquulo nolosha maadiga ah waxaa lumaya nolosha jaceylka , waxa uuna iloobaya kulamada Romantic-ga ah . Sidee jawigaas ku soo celin kartaa? u qoondeey ninkaada habeen qorsheysan, ka codso in banaanka ka soo cunteysaan , ku soo jilci banaanka adiga oo dhoola cadeyn ku soo dilay guriga keen markaas wiishka u yeeri . Fikirkaada waa muhiim hadaad hayso arimo kale oo wiiqa rabitaanka galmo ee haweenka si asxaabta bogga uga faa`ideystaan.
Waxaa laga yaabaa in aad dareento in rabitaanka galmo ee ku aadan lamaanahaaga uu hoos u dhacay isla markaana aheyn qaabkii hore oo kaliya aad u sameyneyso in aad qanciso isaga . Ogoow kaligaa ma aha ee waxaa jira haween badan oo arintaan ka sheeganaya , waxaan warbxintaan ku soo qaadaneynaa sababaha haweenka ku keena in ciyaarta sariirta ka caagto . * Baaritaano ayaa sheegaya in haddii fowdo ay ka jirto qolka jiifka taas waxa ay keeneysaa murago iyo hamaansi (halaaqo) waxa ayna hoos u dhigeysa rabitaanka galmo Sidee ayaad ku soo ceshan kartaa rabitaanka galmo ugana hor tagti kartaa fowdadaas? kaliya ninkaada u muuji falal Romantic ah oo kicinaya dareenkiisa xooggana waxaad saartaa in guriga caraftiisa ay kam-kamto. * Xanaaqa : Haddi aad u careysan tahay ninkaada lagama yaabo in macaan raaxo aad hesho si aad rabitaankada u soo ceshatid daba gal ku samee isha xanaaqaas uu ka yimid , ha ogalaan in xanaaqa uu kaa sumeeyo kulanka macaan ee sariirta . * Wax yaabaha maadiga ah : cabsida dhanka maaliyada saameyn xooggan ayay ku leedahay rabitaanka galmo , inta aad sariirta been ku sheegi laheyd gabaryaheey adiga oo murago maaliyadeed ku hayso ha iska xaadirin garoonka ciyaarta . * Haddii u kacsan Cholestrol-ka dhiiga : waxaa jira xariir ka dhaxeeya sara kaca Cholestrol-ka iyo gaaridda haweenka macaanka galmada , iyadoo haddii uu saro maro waxaa uu xayirayaa in dhiigga uu ku soo shubmo mantiqada kaadi hayska wax ayna taasi yareeneysa dareemaha xubinta haweenka waxa ayna keeneysa in ay adkaato in macaanka aad gaarto , waana arin galmada ka dhigeysa mid niyad jab ah . Marka ay arintaan jirto maxaad sameyneysaa? badel jadwalkaada cunno , wacdaraha.com waxa ay ku leedahay sidoo kale waxaad iska yareeysaa cabidda caanaha gasaceysan oo badso cunista qudaarta . Jawiga Romantic-ga oo qarsooma : hadii uu ninka ku mashquulo nolosha maadiga ah waxaa lumaya nolosha jaceylka , waxa uuna iloobaya kulamada Romantic-ga ah . Sidee jawigaas ku soo celin kartaa? u qoondeey ninkaada habeen qorsheysan, ka codso in banaanka ka soo cunteysaan , ku soo jilci banaanka adiga oo dhoola cadeyn ku soo dilay guriga keen markaas wiishka u yeeri . Fikirkaada waa muhiim hadaad hayso arimo kale oo wiiqa rabitaanka galmo ee haweenka si asxaabta bogga uga faa`ideystaan.